ခန္ဓာကိုယ် Scanner, ခန္ဓာကိုယ် Scanner စက်ရုံကျင်းပလက်သတ္တု Detector, Rechargeable လက်ကျင်းပတရုတ်လက်
ဖေါ်ပြချက်:ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပလက်,လက်သတ္တု Detector,လက်သတ္တု Detector ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပ,ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပအားပြန်သွင်းနိုင်လက်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လက်ကိုင်သတ္တု Detector > ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပလက်
ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပလက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပလက်, လက်သတ္တု Detector ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လက်သတ္တု Detector ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ချိန်ညှိ sensitivity ကို Handheld သတ္တု Detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တုနှင့်လျှပ်စစ် detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အံ့သြဖွယ်လက်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးအဘို့လက်-ကျင်းပသံလိုက်စက်ကွင်းတိုင်းကိရိယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး metal detector ရေဒါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Metalldetektor လုံခြုံရေး Wand  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Garrett superwand သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးလက်သည်း detector Wand  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး metal detector ကိရိယာအစုံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသေးစားသတ္တု detector Wand  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်ကျင်းပလုံခြုံရေးသတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး metal detector ကင်နာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မက်ထရိုဘူတာရုံများအတွက်သတ္တုရှာဖွေရေးကိရိယာများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပူ-အရောင်းရဆုံးလက်ကိုင်သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအထိခိုက်မခံလက်ကိုင်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ce နှင့်အတူလက်ကိုင်သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ချိန်ညှိ sensitivity ကို Handheld သတ္တု Detector
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 18.5 / Set/Sets
3 ချိန်ညှိငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်လက်-ကျင်းပသတ္တု detector နှင့်အတူ PD-140 မြင့်သော sensitivity ကို - (မူရင်းကြိုးမဲ့အားသွင်းနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်တာဝန်ခံတပ်ဆင်ထားနိုင်) နိဒါန်း: အကြမ်းခံအကြီးစားစကင်ဧရိယာ, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, မြင့်သော...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12 / Set/Sets
လုံခြုံရေး metal detector ရေဒါ
(ခိုင်ခံ့ခြင်းနှင့်အားနည်းညွှန်ပြချက်အလင်းနှင့်အတူ) စူပါမြင့်မားသော sensitivity ကို GC-1002metal detector ဖော်ထုတ်မယ်အကွာအဝေး: 1. Pin 30 - 50mm 2. 64 အမျိုးအစားပစ္စတို 200mm 3. ခြောက်လက်မဓားမြှောင် 250mm 4. အချင်း 20mm သံမဏိဘောလုံးကို 120mm သတ္တု...
Metalldetektor လုံခြုံရေး Wand
Garrett superwand သတ္တု detector
လုံခြုံရေးလက်သည်း detector Wand
လုံခြုံရေး metal detector ကိရိယာအစုံ
အသေးစားသတ္တု detector Wand
လက်ကျင်းပလုံခြုံရေးသတ္တု detectors အ
လုံခြုံရေး metal detector ကင်နာ
ပူ-အရောင်းရဆုံးလက်ကိုင်သတ္တု detectors အ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 20 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 150000pcs/Month, 8 days
တရုတ်နိုင်ငံ ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပလက် ပေးသွင်း
ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်လူတွေအိမ်တံခါးဘောင်သတ္တု detector ဂိတ်ပေါက်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ပြီးနောက် hunman ခန္ဓာကိုယ် detect လုပ်ဖို့လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လက်ကျင်းပခန္ဓာကိုယ်ကင်နာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်-ကျင်းပသတ္တု detector ကိုထိခိုက်ခံရခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဝါဒအားဖြင့်ပျက်စီးခံရခြင်းမှလူရဲ့အသက်တာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ တရုတ်ကျင်းပကျင်းပသတ္တု detector စျေးပေါဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကောင်းလှ၏။ နှင့်လည်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတန်ဖိုးရှိ 1 နှစ်အာမခံ, ပူဇော်!
ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပလက် လက်သတ္တု Detector လက်သတ္တု Detector ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပ ခန္ဓာကိုယ် Scanner ကျင်းပအားပြန်သွင်းနိုင်လက် စူပါ Scanner ကျင်းပလက်